သော့ချိတ်အမျိုးအစားများ - သတင်း - Sanming Hanhe Arts & Crafts Co. , Ltd
စုံတွဲသော့ချိတ်အသစ်တီထွင်ထားသောသွပ်အလွိုင်းလက်ဝတ်ရတနာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဝတ္ထုလက်ဆောင်အတွက်လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ကျောသည်လေဆာ LOGO၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင်သော့ချိတ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု: ကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေး၊ ထုတ်ကုန်သစ်မြှင့်တင်ရေး၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ကျောင်းအထိမ်းအမှတ်အမှတ်တရများ၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းအထိမ်းအမှတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများ
2. Car logo buckle
ကားအမှတ်တံဆိပ်သော့ချိတ်အသစ်တီထွင်ထားသော zinc alloy ကားထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်မျက်နှာပြင်ကိုဆီရွှဲသို့မဟုတ်ရှားပါးသောသတ္တုဖြင့်သုတ်လိမ်းပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု: ကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေး၊ ထုတ်ကုန်အသစ်မြှင့်တင်ရေး၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများအတွက်အထိမ်းအမှတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများ
3. Crystal buckle
ပုံဆောင်ခဲများနှင့်သံမဏိပစ္စည်းများနှင့်လက်ရာများသည်လက်ရာမြောက်ပြီးတာရှည်ခံသောကြောင့်လူငယ်သူငယ်ချင်းများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။ အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သော hardware ၏ "အအေးပုံစံ" အတိအကျဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသော့ချိတ်ဒီဇိုင်းများသည်၎င်းမှအတိတ်သို့ပြောင်းသွားသည်။ လှပသေသပ်သောပုံစံသည်အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ နွေရာသီရောက်တော့မယ်၊ အဲဒါကအလှဆင်လို့လည်းကောင်းတယ်။
နေရောင်ခြည်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သော့ချိတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးချထုတ်ကုန်များနောက်ဆုံးတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးနိမ့်သော amorphous silicon solar cells များ၏ power supply principle ကို သုံး၍ အရည်အသွေးမြင့် LCD flash နှင့်တောက်ပစေသည်။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ကြေငြာထားသောလက်ရာနှင့်ဝတ္ထုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Phantom အရောင် LCD display သည်ပျော်စရာကောင်းသောနည်းပညာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု: ကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေး၊ ထုတ်ကုန်သစ်မြှင့်တင်ရေး၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ကျောင်းအထိမ်းအမှတ်အမှတ်တရများ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကွန်ယက်၊ အာမခံ၊ စာတိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မီးရထား၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရှေ့ခြမ်းသည်တစ်ဘက်တွင်တောက်ပနေပြီးနောက်ဘက်ခြမ်းသည်လေဆာစက္ကူဖြစ်သည်။
5. ငြိမ်နေသော buckle အပြင်
အလုပ်လုပ်နိုင်သော electrostaticသော့ချိတ် သည်aဖြစ်သည်သော့ချိတ်၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၊ မော်တော်ကားများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့်အိမ်သုံးအသုံးအဆောင်များကဲ့သို့နေ့စဉ်အသက်တာ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အသုံးပြုနေစဉ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖယ်ရှားရန် static လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုတို့ရန်သော့ချိတ် ကိုကိုင်ထားပါ။
ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ဆောင်ချက် - ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၊ မော်တော်ကားများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့်သတ္ထုအရာဝတ္ထုများကဲ့သို့နေ့စဉ်ငြိမ်နေသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဖျက်သိမ်းချိန်သည် ၀.၂ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငြိမ်နေသောလျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အန္တရာယ်များလုံးဝမရှိပါ၊ လုံခြုံပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ညီညွတ်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။